काठमाडौं बस्ने संक्रमितले गाउँको ठेगाना नटिपाउँदा हैरान – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं बस्ने संक्रमितले गाउँको ठेगाना नटिपाउँदा हैरान
काठमाडौं, १७ असार । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको प्रेस ब्रिफिङ सुन्दा लाग्छ, काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोरोनाको जोखिम छ र ? तर, सडकमा सवारीसाधनको जाम छ। पैदल यात्रुको उस्तै चाप छ। लकडाउन खुकुलो भएको मौकामा संघीय राजधानी भित्रिनेको लर्को छ। पीसीआर परीक्षण गर्न टेकु अस्पतालमा उस्तै भीड लाग्छ। दैनिक औसत ८ सय जना लाइन लाग्ने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।
‘आत्मीयता रहने हुनाले जन्मथलोको मायाले हो वा आफ्नो परिचय लुकाउनका लागि हो। त्यो थाहा भएन’, महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘तर, वास्तविक ठेगाना उल्लेख नगर्दा हामीलाई संक्रमित खोज्नै हैरान हुने गर्छ।’ कोरोना ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ। देशभरका २२ वटा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती प्रयोगशालामा दैनिक ४ देखि ७ हजारसम्म स्वाब नमुना परीक्षण हुन्छ। यो खबर आजको अन्नपूपर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
लकडाउनका कारण आँपले बजार नपाउदा कपिलवस्तुका किसान चिन्तित